14 Zviratidzo Zvemweya Kuregeredza Muhukama - Ukama
Vanhu vane zvido zvepfungwa zvakaomarara, uye kana tiri muhukama nemumwe munhu, zvakakosha kwazvo kuti izvo zvinoda kuzadzikiswa.
Kuregeredza kwepamoyo kunogona kuve kunonetsa kuona muhukama kana muchato, asi zvinogona zvakare kukuvadza.
Isu tese tinogona kunzwa sekuda kwedu kwekushushikana pamoyo nguva nenguva, asi inova dambudziko rakakura kana zvikaitika nguva dzose.
Kwete chete iyo inogona kutora kukanganisa kwayo pahukama hwako, inogona kukuvadza kuzviremekedza kwako.
Heino nzwisiso yekuti chii kusagadzikana kwepamoyo mune mamiriro ehukama hwepabonde, maitiro ekuzviona, uye zvaunogona kuita nezvazvo.
Kuregererwa kwepfungwa kunorevei chaizvo?
Kushushikana kwepfungwa ipfungwa yekuti isu tave kujaira kunzwa nezvayo muhukama hwemwana-mubereki pane hukama hwepabonde kana michato.
Asi hazvireve kuti haingave iri nyaya hombe pakati pevanodanana.
Kusagadzikana kwepfungwa ndepaya apo mumwe wako kana murume kana mukadzi anogara achitadza kutora manzwiro emumwe munhu, kana kushaya hanya neaya manzwiro kana manzwiro. Iko kutadza kupindura zvakakwana kune zvinodikanwa zvemumwe wako.
Kushungurudzwa mupfungwa kunogona kuve kunonyengera kuziva sezvo zvisiri zvinobatika, asi zvine zvazvinosanganisira imwe mhando yechiito chisina kunaka. Kunetseka kwepamoyo, kune rumwe rutivi, kuri pamusoro pekushayikwa kwakazara kwechiito.
Wakambonzwa mumwe munhu achigunun'una nezvekuti mumwe wake ari kusawanikwa sei pamoyo?
Kana mumwe munhu achiregeredza mumwe wake zvepamoyo, zvinogona kunzwa sekunge vanogara vaine madziro avo kumusoro. Ivo havatarise chero cherechedzo yemanzwiro emumwe wavo, uye zvirokwazvo havaite chero chinhu nezvavo.
Kana iwe usina hukama hwepamoyo newawakaroorana naye kana wawakaroorana naye waungade kuva naye, zvingave zvakaoma kunyatso tsanangura chaicho chavanoita kana chavasingaite icho chinoita kuti unzwe saizvozvo.
Asi hazvireve kuti hazvikukanganisa. Izvo zvinogona kukuita iwe unzwe usiri-kudiwa uye kutora mutero wayo pane kwako kuzviremekedza. Kusacherechedzwa kunotumira iwe meseji ekuti manzwiro ako uye zvaunoda hazvinei.
mukomana anokudana pane kutumira mameseji
Sezvo zvanyanya kuoma kuona kuregeredzwa kwemanzwiro, taisa pamwechete zvimwe zviratidzo zvinofanirwa kukubatsira kuti uzvione kana zviripo muhukama kana muwanano yako.
Zviratidzo gumi nemana zvekuregeredzwa kwepamoyo muhukama.
1. Iko kutarisisa kunogara kuri pavari.
Hupenyu hwavo uye zvavanoda zvinogara zviri pakati pekutarisirwa. Hwako budiriro kana mazuva akaipa anoenda asina kutenderwa, asi ivo vanotarisira kuti iwe ufare kana kugarisana navo.
Ivo vari pakati penyika yavo, uye iwe unonzwa senge padivi show.
2. Havasi ivo vekutanga munhu waunoda kuudza.
Unowana dzimwe nhau dzakanaka kana dzimwe nhau dzakaipa uye hunhu hwako hwekutanga kutaura… shamwari yako yepamwoyo, kana amai vako, kana mukoma wako, kana chero ani zvake.
Wako wawakaroorana naye kana wawakaroorana naye haasi iye munhu wekutanga waunoda kuudza, nekuti iwe unoziva kuti haugone kuwana mhinduro yauri kutarisira kana rutsigiro rwaunoda.
3. Unonzwa kunge uri wega muhukama.
Kunzwa kwako kukuru ndekwekuti pane chaiko mumwe wenyu muhukama uhu. Kuti ivo havapo chaizvo varipo zvachose.
Iwe haunzwi kunge uine rutsigiro rwavo kana sekuti vakazvipira kuita kuti hukama kana roorano zvishande.
Iwe haugone kuzunungusa kunzwa kwekusurukirwa, kunyangwe pavanenge vari padhuze newe.
4. Vanovhara kana iwe uchiedza kutaura navo.
Ukayedza kutaura navo nezve chero nyaya muhukama hwako, vanongo vhara vhara.
Ivo vanovhara, varegedza kunze kukuregeredza iwe, kana kunyange kubuda mukamuri kana iwe uchiedza kukurukura chero nyaya, kana ramangwana rako pamwe chete.
Ivo havapindiri mukukakavadzana newe, sezvo izvo zvingangove zvakawandisa sekushanda nesimba uye zvaizoreva kuti imi vaviri mozozofanira kugadzirisa gakava iri.
5. Vanokupai chinyararire.
Kana vakatsamwa newe, havakupopotere kana kukuudza zvawakatadza. Izvi zvaizoreva kuisa kuyedza kwakanyanya muhukama.
Vanoda zvavo kungokupai chinyararire vorega muchitambura, vachishamisika chaizvo kuti chii chiri kuvatsamwisa.
6. Iwe hauzive zvavanoda kwauri.
Iwe hauna chokwadi nezvavanoda kunze kwehukama kana kubva kwauri. Iwe hauzive zvavanotarisira kubva kwauri kana nei vainewe.
Iwe unonzwa kunge uri mugungwa usina kana seimba yemwenje kukuzivisa iwe kuti matombo aripi.
7. Kuzviremekedza kwako kune yakaderera-nguva.
Uri kutanga kunzwa pasi pauri.
Kushayikwa kwemumwe wako kukufarira, zvauri kutanga kunzwa sekunge hauna kukodzera rudo rwavo uye kutarisirwa. Kana, zvechinhu ichocho, chero ani zvake rudo kana kutarisisa.
8. Uri kudzvinyirira manzwiro ako.
Iyo meseji iwe yauri kutora kubva kune mumwe wako kana murume / mukadzi ndeyekuti manzwiro ako haana kukodzera kupa chero kutarisisa uye haana kukosha, saka wave kutanga kutenda izvo.
Iwe hautombozvitora zvakakomba iwe pachako, uchizviwisira pasi uye kuzvipfuudza sezvisingakoshi kana zvidiki.
9. Havapedzi nguva newe.
Havaise pamberi pekushandisa nguva newe, uye dzimwe nguva zvinoita sekunge vanozvidzivirira.
ndinonzwa sekunge hukama hwangu hwave kupera
Ivo vanogara vakabatikana nechinhu chimwe kana chimwe, uye mhando nguva pamwe chete ishoma uye iri pakati nepakati.
Haumbofi wakareba, inononoka kufona uchingopfuura nguva yezuva. Ivo vanoita kuti hurukuro dzive pfupi.
10. Unonzwa sokuti haugoni kuva pachako navo.
Iwe haugone kuzorora uye kuzorora uchitenderedza mumwe wako, nekuti haunzwe kusununguka pavari.
Iwe unoziva ivo havanyatsokuda iwe pane zvauri, uye iwe wakadzidza kuti ivo havana kutora ako manzwiro zvakakomba.
Nekudaro, iwe ikozvino chingoviga ivo vobva vangovaudza zvavanoda kunzwa.
11. Havaiti kuedza neshamwari dzako kana mhuri.
Havaiti kuedza kubatana newe padanho remanzwiro, uye zvirokwazvo havasi kuenda kumusoro nekupfuura kuti vabatanidzane nevanhu vakanyanya kukosha kwauri.
tsananguro yekuvimbika muhukama
Vakazviisa pachena kuti havasi kufarira kushandisa nguva uine shamwari dzako kana mhuri. Uye, pavanenge vainavo, havazvibatanidze mukurukurirano kana kuedza kuvaziva zviri nani.
12. Vanokanganwa mazuva akakosha.
Kana vasina kubatikana pamoyo muhukama kana muchato, ivo pamwe havaise chero kukosha kwepamoyo pamazuva ayo vazhinji vakaroorana vanopemberera pamwechete, kana kumbobvuma.
Ivo vanogona kukanganwa zuva rako rekuzvarwa, rako rekuyeuka, kana kusazomborangarira zuva iro mumwe munhu akakosha kwauri akashaya.
Izvo zvinogona kukuvadza zvikuru uye zvinoreva kuti iwe unonzwa seusingakoshi kana senge mufaro wako kana kurwadziwa hakuna kukodzera kutora zvakanyanya.
13. Vakasendeka kutora matanho mberi.
Iwe unoda kuti hukama hwako hufambire mberi, kuita zvirongwa zveremangwana, kuenda kune zviitiko pamwe chete, kana kutomboita vana.
Asi ivo vanowana nzira dzekuverengera vozviverengera. Ivo vanokuudza kuti haisi nguva yakakodzera, asi ivo havakupe iwe chero zvikonzero nei.
Ivo havagone kunzwisisa kwako kuda kwekutaura nezvazvo, kuronga, uye kuvaka ramangwana rakagovaniswa.
14. Unogara uchigadzirisa matambudziko wega-wega.
Iwe wakadzidza kuti hapana chikonzero chekutendeukira kune mumwe wako kana mumwe wako kuti abatsirwe kana kutsigirwa kana zvinhu zvikaoma, saka pari zvino unongozvigadzirisa wega.
Iwe unoziva kuti iwe uri wega kana zvasvika pakugadzirisa matambudziko ako ese, makuru uye madiki.
Wakagadzira dzimwe nzira dzakasimba dzekutarisana nadzo dzisingasanganisiri kubvunza mumwe wako maonero avo.
Matanho masere ekugadzirisa kusagadzikana kwepfungwa.
1. Funga nezvezvinokonzera.
Nekudaro, iwe waona kuti pane kusagadzikana kwepamoyo muhukama hwako kana muchato. Asi usati watora matanho ekugadzirisa nayo unofanirwa kufunga nezve kwayakabva.
Chii chiri chikonzero cheichi kusagadzikana kwepfungwa? Yakabva kupi?
Icho chinhu chinoratidzira hukama hwenyu kubva pazuva rekutanga, kana kuti vaimbove vanotsigira zvakanyanya, uye kuregeredza uku kwakaitika nekufamba kwenguva?
Izvo zvakavapo zvega uye zvishoma nezvishoma, kana iwe unogona kuzvitsvakira kumashure kune chimwe chiitiko?
Dzimwe nguva, kuregeredza kwepfungwa kunokonzerwa nekushaikwa kwerudo muhukama.
Sezvo kumhanya kwekutanga kwerudo rwechirudo rwunotanga kupera, pane kutsiviwa nerumwe rudzi rwerudo, sezvazvinoita muhukama hwakawanda, dzimwe nguva zvinongoshanduka kusava nehanya.
Uye pane kubvuma kuti kushayikwa kwerudo kunogona kutsanangura kupera kwehukama, vaviri vaviri vanongogadzikana kuita kune hutano husina kusimba.
Asi izvi hazviwanzo zvakadaro. Kuregeredzwa kwepamoyo muhukama kunogona kuuya kana mumwe wako ari panguva yakaoma uye achinyanya kufunga nezvematambudziko avo zvekuti vanokanganwa kutora mumwe wavo.
Ivo vanotora rutsigiro rweumwe wavo sevasina basa uye vanonyanya kufunga nezvekurwira kwavo zvekuti vanorega kudzosera rutsigiro irworwo.
Kuenda panguva yakaoma iwe pachako zvinogona kureva kuti haugone kunyatso tsigira mumwe wako kana mukadzi kwechinguva , uye zvakanaka. Mukudyidzana kwenguva yakareba uye michato, vese vaviri vaviri vachatofanirana kutsigirana panguva dzakasiyana.
Dambudziko nderekuti kana mumwe munhu achiona avo ega nyaya sechikonzero chakakodzera chekuregeredza zvachose manzwiro emumwe wavo munguva refu.
Hukama hunofanirwa kuve hushamwari hwakaenzana uye haugone kutarisira kuti mumwe munhu agare ari dombo rako kana ukasadzosera chero chinhu.
2. Funga kurapwa.
Kushushikana kwepamoyo muhukama kana muchato kunogona kuve chinhu chakanyanya kuoma kugadzirisa pasina rubatsiro rwehunyanzvi.
Kuwana murapi chaiye kunogona kukupa iwe mbiri nzvimbo yekuratidza manzwiro ako, kuwana maonero, uye kuwana nzira yako yekudzokera kune mumwe nemumwe.
Isu tinokurudzira zvikuru pamhepo zvekupa mazano zvehukama zvinopihwa ne. Iwe unogona kukurukura nyaya iripedyo nehunyanzvi kuburikidza nevhidhiyo chat kubva kunyaradzo yeimba yako wega uye uwane rutsigiro imi mose munoda kutenderedza hukama hwenyu moita kuti ive noutano zvakare.
kutaura kune mumwe munhu izvozvi uye / kana kunyorera musangano wepamhepo wezuva rinotevera.
3. Tora matanho akanaka.
Kana iwe uchida kuti hukama hwako hubudirire uye hugare, haugone kungogara pasi uye kumirira mumwe wako kuti achinje kana kuona maitiro avave vachiita.
kutamba mitambo yepfungwa paunenge uchitaura zvinhu
Iwe uchafanirwa kugamuchira mamiriro acho uye nekushingairira kuita chimwe chinhu kuita mutsauko kuhukama hwako.
Panzvimbo pekungogunun'una nezvehunhu hwavo, kune vamwe vanhu kana kwavari, unofanirwa kutanga wafungisisa kuti vaviri vacho vangagadzirisa sei izvi.
Kunyangwe ivo vari ivo vanokuregeredza iwe pamoyo, haugone kutarisira kuti vatore mutoro wese wekuchinja zvinhu.
4. Gara pasi kuti utaure.
Vanhu vazhinji vanoedza kudzivirira kugara pasi kune hurukuro dzakakomba nezvehukama hwavo kana roorano, asi ichi hachisi chimwe chinhu chichagadziriswa nekukurumidza kutaura.
Unofanirwa kutora nguva yakanaka kune mese, kana pasina zvinokukanganisa nguva uye usati wanyanyoneta, uine nzara, kana kushushikana. Uyai nematambudziko muhukama hwenyu ayo ari kukonzerwa nekuregeredza kwavo kwepamoyo.
nzira yekuudza kana hukama hwako hwapera
Ita shuwa kuti unouya pane ino hurukuro kubva panzvimbo yerudo uye nzwisiso, pane kutsamwa uye kupomera kubva pakutanga, sezvo izvo zvisingazokuendese kupi.
5. Usatambe akabatwa.
Ichokwadi chekuti mumwe wako kana murume kana murume akaregeredza zvaunoda zvepamoyo zvinogona kunge zvakakonzera kukuvara kwakawanda, asi kana iwe uchida kuita kuti zvinhu zvive nani pakati pako, izvo zvinokuvadza hazvifanire kunge zviri izvo zvekutaurirana kwako.
Kufungisisa kuti vakakuvadza sei unongoita kuti vawane kuzvidzivirira.
Kana iwe uchida kuita iri basa, saka nenzira dzose tarisa nezve maitiro avo kushamwari yaunovimba, asi kwete kumeso emumwe wako.
Pane kudaro, ita kuti vazive kuti iwe unoda kusvika pasi peizvi kuti hukama hwako huve neramangwana rakanaka.
Taura nezve zvaunogona zvese ita kuti uite mutsauko uye ugadzire yakasimba ine simba pakati pako.
6.Shandisai nguva yemhando pamwe chete.
Funga kune mumwe wako kana murume kana mukadzi kuti imi vaviri munoshandisa yakawanda yemhando nguva yekutarisisa kune mumwe nemumwe kuyedza dzosera mbichana .
Bhuka zororo, enda kunze unosangana neshamwari pamwechete, edza chimwe chinhu chitsva, kana kuenda kune anodanana mazuva.
Funga nezve icho chaive icho chakatanga kukukwezva iwe kune mumwe nemumwe uye ita zvaunogona kumutsidzira izvo.
7. Iva akatendeseka newe pachako.
Zvinosuruvarisa, kuregeredza kwepamoyo muhukama hachisi chinhu chinogona kugadziriswa nguva dzose. Chingave chiratidzo chekutsemuka icho chinomhanya zvakadzika kwazvo hachigone kuiswa zvigamba.
Kana iwe uchikwanisa kutaura chokwadi kuti iwe waita zvese zvaunogona kuti uchengetedze hukama hwako uye zvave zvisina kushanda, saka inogona kunge iri nguva yekufunga kuti vaviri venyu vangave vari nani vari vaviri here.
Hapana chikonzero chekugara muhukama chiri kuita kuti mese musafare, saka iva akatendeseka newe kana nguva yasvika yekurega ichienda.
8. Iva nemoyo murefu.
Nguva dzose yeuka kuti matambudziko akaita seaya haazombogadziriswa nekukurumidza. Kuchatora basa rakaoma rakawandisa kubva kwamuri mese kuenda dzosera hukama hwako panzira .
Asi, kana iwe uchishivirira uye uchida kuisa iro basa mukati, pane mukana wese wekuti iwe uchazodzokera kunzvimbo yekubatsirana kwepamoyo kutsigirana uye mufaro.
Kunyange zvakadaro hauna chokwadi chekuita kana iwe uchinzwa kushushikana nemweya nemumwe wako kana mumwe wako?Isu tangotaura nezvekurapa mune poindi # 6 pamusoro uye isu chaizvo tinokukurudzira kuti iwe ufunge nezvazvo, kungave wega kana sevanhu vaviri. Chii chaunofanira kurasikirwa?Wadii kutaurirana online kune hukama hukama kubva kuRelationship Gamba uyo anogona kukubatsira kuti uone zvinhu. Simply.
9 Hapana Bullsh * t Matipi Ekukubatsira Iwe Nemi Zvakaoma Muhukama Hwako
Mazano Akareruka Ekuti Uve Anofara MuMuchato Usina Kufara
10 Zviratidzo Zvakanaka Iwe Uchiri Murudo Navo: Ungaziva Sei Chokwadi
Maitiro Ekuita Kuti Hukama Hwako Husimbe: 13 Hapana Bullsh * t Matipi!
Maitiro Ekubata Nemurume Asingazotaura Newe Nezve Chero Chinhu
maitiro ekuudza kana mumwe munhu ari kukushandisa iwe mari yako
kuvimba munhu anoreva nhema zvakare
varume vane hunhu hwekuzvitarisira pasi
sei kunamatira kune mukomana wako
kusiira mukadzi wako mumwe mukadzi
kutora murume akaroora anotora mazwi
maitiro ekuita kuti mukomana akusuwa seunopenga